Fanararaotana sy fanesorana amin'ny Soavaly | Soavaly Noti
Fanararaotana sy tsy fananana trano
Misy fifehezana tsy misy farany izay misy afovoaho ny soavaly. Iray amin'izany ny fanorisorenana sy fandravana. Izany dia ahitana ny mihazakazaka amin'ny soavaly manandrana manipy faty amin'ny lefona. Ity fifaninanana ity dia tanterahina tsiroaroa ary ny tsirairay amin'izy ireo dia tsy maintsy mandeha miaraka lefona hanindrona ny reces. Raha ny lojika dia azo atao amin'ny toerana lehibe misy kilometatra maro mankany tsy manakana ny galona.
Araka ny hitanao dia fanatanjahan-tena tsy mifanaraka amin'ny foto-kevitra maro eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny sy mety misy izany ny mpanaratsy azy sy ny mpankafy azy, toy ny fanatanjahan-tena rehetra.
Ao amin'ity habaka ity no hahitanao karazana antsipiriany rehetra momba ny fanorisorenana sy ny fitifirana, torohevitra, toerana anaovana hetsika, fitaovana sns.
ny Jenny monge hace 3 taona .
Ny soavaly Quarter Horse na Quarter, dia karazana soavaly teraka any Etazonia izay mety indrindra amin'ny ...